Mutambo wevhiki uno wemahara kubva kuApp Store unonzi Nightgate | IPhone nhau
Rimwe vhiki, vakomana veCupertino vakasarudza mutambo sekushandisa kwevhiki, mutambo uyo, oddly zvakakwana, hauna mhando yekutenga-mukati-app, chimwe chinhu chaive chakajairika mumazita ekupedzisira. Pachiitiko ichi mutambo wakasarudzwa unonzi Nightgate, iwo mutambo wepashoma uine chinoonekwa chinokwezva vekutanga kuti vachinje, asi chete nekuda kwechitarisiko chayo asi nekuda kweruzha rweruzha uye mapuzzle akaomarara anotiratidza nyaya inonakidza yekupona . Nightgate ine mutengo wenguva dzose we3,99 euros, asi kusvika China chinotevera tinogona kuchirodha mahara.
Mushure mehondo yakareba uye inotyisa, tinozviwana tiri mugore ra2398 uye chinhu chega chasara pasi pano network yevanoshanda vakangwara vanozivikanwa seNightgate. Mumutambo wese isu tichafanirwa kukunda iwo mashanu matanho akagadzirwa aine yakawanda ruzivo kunzvenga vavengi, kunzvenga mabara uye kushandisa nguva sezvatinoongorora kupfuura nharaunda yedhijitari yeNightgate.
1 Nightgate main maficha
2 Zvinyorwa zvehusiku
Nightgate main maficha
Inoshamisa dhizaini dhizaini inosanganiswa neakaomarara geometri uye mushandisi kubatana.
Ruzha runotipa anopfuura maminitsi makumi mana emumhanzi wepakutanga zvachose.
Kunge mimwe mitambo yakawanda, Nightgate inoenderana neiyo iPhone, iPad, iPod touch, uye Apple TV.
Inoenderana neICloud, kuitira kuti tikwanise kuenderera nemitambo yedu pane mamwe majaira.
Nightgate inoshandurwa zvakazara muchiSpanish, Chirungu, ChiFrench, Chijapani, ChiChinese, ChiGerman, ChiItaly, ChiKorea, ChiPutukezi, neRussia.
Kugadziridza kwekupedzisira: 24-01-2017
Saizi: 154 MB
Inoda iOS 7 kana gare gare uye inoenderana neiyo iPhone, iPad, iPod touch, uye Apple TV.
Rangarira kuti ichi chishandiso chinowanikwa kurodha kusvikira rinotevera China, Kurume 2.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mutambo wemavhiki uno wepaApp Store unonzi Nightgate